05/01/2010 - 06/01/2010 ~ The Light of Truth
Wednesday, May 26, 2010 The Light of Truth No comments
သမ္မာအလင်းဘလော့ဂ်ရဲ့ ပရိသတ်အားလုံး မင်္ဂလာပါ။
ဒီနေ့တော့ ပညတ်တရား/ အကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ သမ္မာကျမ်းစာမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အတူတကွ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ရှင်မဿဲ ၁၉း ၁၆- ၂၂ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကနေ ကျနော်တို့ကို
ဘုရားသခင်က ဘာတွေပြောနေတယ်ဆိုတာ ရှာကြည့်ရအောင်။
သခင်ယေရှုဆီကို လူတစ်ယောက်က လာမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ အစပြုလိုက်ကြရအောင်။
" ကောင်းမြတ်သောဆရာ၊ ထာဝရအသက်ကို ရဖို့ ကျနော် ဘာကောင်းမှုတွေလုပ်ရမလဲ " တဲ့။
သူမေးတဲ့မေးခွန်းက အရှင်းကလေးပါ။ ဒါပေမယ့် သခင်ယေရှုက အဲဒီမေးခွန်းကို ဘယ်လိုပြန်ဖြေသလဲ?
" ငါ့ကို ဘာကြောင့် ကောင်းမြတ်တယ်လို့ခေါ်တာလဲ။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ကောင်းမြတ်တယ်။
အသက်ရှင်ခြင်းကို ၀င်စားချင်တယ်ဆိုရင် ပညတ်တော်တွေကို စောင့်ရှောက်ပါ။ " တဲ့။ မဿဲ ၁၉း ၁၆- ၁၇
ဒီလူက သခင်ယေရှုကို ကောင်းမြတ်သောဆရာလို့ခေါ်တာကို သခင်ယေရှုလက်မခံဘဲ
ဘာကြောင့်ငြင်းပယ်ပြီး ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောတာလဲ။
တကယ်တော့ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ လူ့ဇာတိကိုခံယူထားတဲ့သခင်ယေရှုက
လူမှန်ရင် ဘယ်သူမှမကောင်းမြတ်ဘူး။ ငါလည်းမကောင်းမြတ်ဘူး။
ကောင်းတဲ့သူဆိုလို့ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းပဲရှိတယ်လို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်လို့ အခုလိုပြန်ဖြေတာပါ။ အဲဒီလိုဖြေပြီးမှ ပညတ်တော်တွေကို စောင့်ရှောက်ခိုင်းတာကလည်း ပညတ်တရားကိုလိုက်လျှောက်ဖို့
လူမှန်ရင်ဘယ်သူမှမတတ်နိုင်ဘူး။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းပဲ တတ်နိုင်တယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် လူမှန်ရင် ကောင်းတာလုပ်နိုင်လောက်အောင် ဘယ်သူမှမကောင်းဘူးလို့ ဆိုနေတာပါ။
သခင်ယေရှုက အဲဒီလိုဖြေတဲ့အခါ လူက ထပ်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
" ဘယ်လိုပညတ်တွေကို စောင့်ရှောက်ရမှာလဲ " တဲ့။ အဲဒီအခါ သခင်ယေရှုက -
(၆) ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့.....
အစရှိတဲ့ပညတ်တော်(၆)ချက်ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုက ဒီပညတ်တွေကိုပေးတဲ့အခါ
လူက- ဒီပညတ်ရှိသမျှတို့ကို ကျနော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းက စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးပြီ ။
ဘယ်အကျင့်လိုသေးလဲ လို့ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြန်ဖြေပါတယ်။
သူ့ရဲ့စကားကို သခင်ယေရှုက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတော့-
သင်ဟာ စုံလင်ခြင်းကိုရောက်ချင်ရင် ကိုယ်ဥစ္စာတွေကိုရောင်းပြီး ဆင်းရဲသားတွေကိုပေးပါ။
အဲဒီလိုလုပ်ရင် ကောင်းကင်ဘုံမှာ ဘဏ္ဍာကိုရမယ်။
ပြီးမှ ငါ့နောက်လိုက်ပါ လို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မဿဲ ၁၉း၁၈- ၂၁
ဒီအချက်တွေက ကျနော်တို့ကို ဘာတွေသွန်သင်နေတာလဲ?
ကျနော်တို့တွေသည် အကျင့်တရားအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံကို တိုးဝင်မယ်ဆိုရင်
ပညတ်တရားမှာ ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်လို့ ပြီးပြီလို့ထင်ပေမယ့် ထပ်ပြီးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
ကျနော်တို့က အကုန်လုပ်ပြီးပြီလို့ ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ပြောလိုက်တိုင်း ဘုရားသခင်က ဒါလုပ်ဖို့ ကျန်သေးတယ်လို့ ပြောနေပါတယ်။ ပညတ်တရားရဲ့အကျင့်အားဖြင့်သွားမယ်ဆိုရင်
ကျနော်တို့လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေက ဒါပြီးရင် ဒါ၊ ဒါပြီးရင် ဒါ အစရှိသဖြင့် အများကြီးရှိနေပါတယ်။
အဲဒါကတော့ ယေရှုနောက်လိုက်ဖို့ပါပဲ။ မဿဲ ၁၉း၂၁(b)
မိတ်ဆွေ ဘယ်လိုပဲကောင်းမှုတွေလုပ်နေပါစေ၊ သခင်ယေရှုမပါရင် အလကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အသက်တာမှာ ထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မယ့် အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းက
သခင်ယေရှုခေါ်ရာကိုလိုက်ဖို့ပါပဲဆိုတာကို သမ္မာကျမ်းစာထဲက တခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့
နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။ မဿဲ ၄း ၁၈- ၂၀မှာကြည့်တဲ့အခါ ပေတရုတို့ညီအစ်ကို(၂)ယောက်ကို
သခင်ယေရှုက သူ့နောက်လိုက်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာ သူတို့က ချက်ချင်းပဲလိုက်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။
အသက်လမ်းဖြစ်တဲ့ယေရှုနောက်ကို လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းက မိတ်ဆွေရဲ့တစ်ဘ၀လုံး
ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်နေရင်း အချိန်ကုန်ခံနေတာထက် ပိုပြီးအရေးကြီးသလို ပိုပြီးလည်း အာမခံမှုရှိပါတယ်။
လူလုပ်လို့ ပြီးပြည့်စုံမှုရှိလာမှာမဟုတ်တဲ့ အကျင့်တရားတွေကို လုပ်ဆောင်နေမယ့်အစား
အကျင့်တရားအလုံးစုံကို ပြီးပြည့်စုံစေသူ သခင်ယေရှုခေါ်ရာကို လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနိုင်ပါစေ။
Monday, May 24, 2010 The Light of Truth No comments
ကောင်းကင်မှာပဲ လို့ ......။
မသုံးတာကြာတဲ့ ရေတွင်းထဲမှာ ........
အမှိုက်သရိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ ရေကန်ငယ်ထဲမှာ ........။
လရောင်တောက်နေတဲ့ ရေတစ်ခွက် ......
လက်ခုပ်ထဲ ထည့်သောက် ......
တစ်တောလုံးကို ခြောက်မယ် ......။
ကဲ ..... ဘာကွာလဲ
လူဆိုတဲ့ ခင်ဗျားနဲ့ .....။
Friday, May 07, 2010 The Light of Truth No comments
မင်္ဂလာပါ။ ကျနော်တို့လေ့လာကြမယ့် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ဖွင့်လိုက်ကြရအောင်။
ခင်ဗျားဘ၀မှာ ဘယ်နှကြိမ်လောက်မှားခဲ့ဖူးလဲ။ ဒီမေးခွန်းကိုမဖြေခင်မှာ မိတ်ဆွေကိုကျနော်သတိပေးချင်တယ်။ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပြုမိဖူးတဲ့အမှားတွေပါ မကျန်ခဲ့ရလေအောင်
မိတ်ဆွေမှတ်မိတဲ့ မှားယွင်းမှုအကြိမ်ပေါင်းကို (၂)ဆပွားပြီးတွက်ကြည့်ပါ။
ကဲ ....... ဒီလောက်ဆို ကိုယ်ဘယ်လောက်ဆိုးညစ်တယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေနားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အဲဒီလောက်ဆိုးညစ်တဲ့ခင်ဗျားလိုလူကို ဘယ်သူတွေက အထင်ကြီးလေးစားနေကြသလဲ၊
ဘယ်သူတွေကများ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချနေကြသလဲ။ ဘယ်သူတွေကများ ချစ်ခင်နေကြသလဲ။
မိတ်ဆွေကိုအထင်ကြီးလေးစားနေကြတဲ့သူတွေကို မိတ်ဆွေရဲ့အမှားတွေထဲက တစ်ဝက်လောက်ဖြစ်ဖြစ်
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပြီး အသိပေးရဲလား။ အဲဒီလို အသိပေးပြီးရင်ကော အဲဒီလူတွေက မိတ်ဆွေကို
အရင်အတိုင်းပဲ အထင်ကြီးလေးစားကြမယ်လို့ သေချာရဲ့လား။ ကဲ ..... ဒီအပိုင်းကိုထားလိုက်ပါဦး။
သမ္မာကျမ်းစာထဲက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအားဖြင့် ကျနော်တို့ ခွန်အားယူကြရအောင်။
ရှင်ယောဟန် ၄း ၁- ၃၅ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကို ကြည့်ရအောင်။
ဒီအကြောင်းအရာမှာ သခင်ယေရှုက ရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်ကို အပြစ်လွှတ်တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံစားရတဲ့မိန်းမရဲ့အသက်တာအကြောင်းကိုပါ တပြိုင်နက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သခင်ယေရှုက ရှမာရိနယ်ကိုဖြတ်သွားရင်း ယာကုပ်ရေတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာ
ခရီးပန်းတော်မူတဲ့အတွက် ထိုင်ပြီးနားတော်မူတယ်။ အဲဒီလိုနားတဲ့အချိန်က ညနေ(၆)နာရီဆိုတော့
သူတို့နိုင်ငံရဲ့စံတော်ချိန်အရဆိုရင်- ညဉ့်ဦးယံရဲ့အစ နေ၀င်ချိန်ဖြစ်တယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ လူအများစုက လုပ်ငန်းကိုယ်စီကနေ အိမ်ကိုပြန်ရောက်ပြီး
မိသားစုနဲ့အတူ အနားယူညစာစားကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာမှ လူတောမတိုးဝံ့တဲ့ ရှမာရိမိန်းမတစ်ယောက်က ယာကုပ်ရေတွင်းကို ရေခပ်ဖို့ထွက်လာတယ်။ သူ လူတောမတိုးဝံ့တာက အကြောင်း(၂)ချက်ရှိတယ်။
(၁) အချက်က လူတွေက အထင်သေးစက်ဆုပ်ပြီး ပစ်ပယ်ထားလို့ဖြစ်တယ်။
(၂) အချက်က သူကိုယ်တိုင်က လိပ်ပြာမလုံတဲ့အတွက် လူတွေကိုရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လာလို့ဖြစ်တယ်။
အဲဒီလိုအချက်တွေကြောင့် လူမြင်မခံချင်လို့ သူများတွေအိမ်မှာအနားယူနေကြတဲ့ မှောင်ရီပျိုးစအချိန်ရောက်မှ
ရေခပ်ထွက်လာတဲ့မိန်းမခမျာ သခင်ယေရှုနဲ့မှ ရေတွင်းမှာလာဆုံကြတယ်။
တိုက်ဆိုင်နိုင်လိုက်တာလို့ မိတ်ဆွေထင်ပါသလား။ တကယ်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာ
တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတာ တစ်ခုမှမရှိပါဘူး။ ဘုရားသခင်က ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် ကျနော်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး
လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုပဲကြည့်လေ ...... သခင်ယေရှုက ဒီရေတွင်းနားရောက်ခါမှ
အချိန်မတော်ကြီး ထိုင်နေတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းမြောက်စရာအချက်ပါ။
ကျနော်တို့တွေနားတဲ့အချိန်မှာတောင် သခင်ယေရှုက လူတစ်ယောက်အတွက် အချိန်မတော်ကြီးမှာ ထိုင်စောင့်နေပါတယ်။ သခင်ယေရှုက နားတာတောင်မှ ကျနော်တို့အတွက် အကျိုးရှိမှ နားပါတယ်။
အဲဒီလောက်မေတ္တာထားတတ်တဲ့ ယေရှုနဲ့ ရှမာရိမိန်းမတို့ ရေတွင်းမှာ ဆုံကြတဲ့အခါ -
သခင်ယေရှုက ရေတောင်းသောက်ပါတယ်။ ယော ၄း ၇
အဲဒီအချိန်မှာ တပည့်တော်တွေက စားစရာဝယ်ဖို့ မြို့ထဲကိုသွားနေကြပါတယ်။ ယော ၄း ၈
သခင်ယေရှုလို တန်ခိုးတော်ကြီးမားလှတဲ့သူ၊ နိမိတ်လက္ခဏာအလုံးစုံကို ပြုနိုင်သူက ဘာကြောင့်များ
တပည့်တော်တွေ စားစရာဝယ်ဖို့သွားတာကို မတားဘဲ မိန်းမတစ်ယောက်ဆီမှာ ရေတောင်းသောက်ရတာလဲ။
တကယ်ဆို သခင်ယေရှုဟာ မုန့်(၅)လုံး၊ ငါး(၂)ကောင်အားဖြင့် မိန်းမနှင့် ကလေးမပါဘဲ
ယောင်္ကျား(၅၀၀၀)လောက်ကိုတစ်ကြိမ်၊ မုန့်(၇)လုံးနှင့် ငါးလေးအနည်းငယ်အားဖြင့် မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကို
ထည့်မရေဘဲ ယောင်္ကျား(၄၀၀၀)ကို တစ်ကြိမ် လောက်ငှအောင်ကျွေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
မဿဲ ၁၄း ၁၃-၂၁၊ မဿဲ ၁၅း ၃၂- ၃၈
သခင်ယေရှုဟာ နိမိတ်လက္ခဏာကို ဖောဖောသီသီ မပြုဘဲ နေလေ့ရှိပါတယ်။
သခင်ယေရှုက အဲဒီလိုရေတောင်းသောက်တဲ့အခါ ရှမာရိမိန်းမက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတော့-
ယုဒလူဖြစ်တဲ့ရှင်က ကျမလိုရှမာရိမိန်းမဆီမှာ ဘာဖြစ်လို့ရေလာတောင်းသောက်ရတာလဲ ... တဲ့။ ယော ၄း ၉
ရှမာရိမိန်းမရဲ့စကားကို သခင်ယေရှုက ဘယ်လိုပြန်ဖြေသလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကို၎င်း၊ အခုရေတောင်းသောက်တဲ့သူဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို၎င်း
သင်သိမယ်ဆိုရင် ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မယ် .... တဲ့။ ယော ၄း ၁၀
ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုမသိ၊ သခင်ယေရှုကိုမသိရင် လူတွေက ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်း၊
အစရှိတဲ့အရာတွေကို ဘုရားကိုပေးပြီး ဘုရားဆီက ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ လဲလှယ်ယူချင်ကြသလို
လူမျိုးစွဲတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့
သခင်ယေရှုကိုသိကျွမ်းမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဟာ ဘုရားနဲ့ အလဲအလှယ်လုပ်သောသူတွေမဟုတ်တော့ဘဲ
တောင်းခံခြင်း/ တစ်နည်းအားဖြင့် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ဆီက ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကို အခမဲ့ရယူနေကြသူတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုအားဖြင့် လူမျိုးရေးအစွဲတွေပပျောက်သွားပါတယ်။
ကျနော်တို့က လူတစ်ယောက်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရ/မရနဲ့ ထာဝရအသက်ရ/မရကို
အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း ရှမာရိမိန်းမက သခင်ယေရှုက
ရေပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကို ရေခပ်စရာပါ/ မပါနဲ့ ချိန်ထိုးပြီး ဆုံးဖြတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ယော ၄း ၁၁
တကယ်တော့ သခင်ယေရှုဟာ ခပ်စရာရှိမှ ရေပေးနိုင်သောသူ/ တနည်းအားဖြင့် အခြေအနေပေးမှ အလုပ်လုပ်သောသူမဟုတ်ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်သောအခြေအနေမှာ အလုပ်လုပ်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး။ ရှမာရိမိန်းမက သခင်ယေရှုကို သခင်ဟာ ငါတို့အဘယာကုပ်ထက်
ကြီးမြတ်သလား လို့လည်း မေးပါသေးတယ်။ ကျနော်တို့ လူတွေက မိမိသိသောအရာ၊ မိမိစွဲကိုင်သောအရာတွေနဲ့ ဘုရားသခင်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိကြောင်းကို
အဲဒီလိုစကားပြောကြရင်း သခင်ယေရှုက ရှမာရိမိန်းမကို အသက်ရေကိုပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အပြင် အဲဒီမိန်းမရဲ့ ဘ၀အခြေအနေကိုပါ ဖော်ထုတ်ပြလိုက်ပြီး သူရဲ့လင်ကိုပါသွားခေါ်လာခဲ့ဖို့ပြောပါတယ်။ ယော ၄း ၁၆- ၁၈
ကျနော်တို့ရဲ့ ဖုံးဖိထားတဲ့အပြစ်တွေကို သခင်ယေရှုရဲ့အပြစ်လွှတ်ခြင်းက လုံလောက်အောင်
ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အပြင် နောက်ထပ်အပြစ်သားတွေရှိရင်လည်း ခေါ်ခဲ့လိုက်ပါဦး၊ ငါ့ရဲ့မေတ္တာတရားက
ဘယ်တော့မှ ပေးလို့မကုန်ပါဘူးလို့ သခင်ယေရှုက ဒီနေရာမှာ ကြေငြာလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေ ခင်ဗျားဘယ်လောက်အပြစ်များများ သခင်ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းက ခင်ဗျားအတွက်လောက်ငှရုံမကဘဲ ပိုတောင်ပိုနေပါသေးတယ်။
ရှမာရိမိန်းမဟာ သခင်ယေရှုရဲ့ အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ခံစားလိုက်ရတဲ့အခါ သူယူလာတဲ့ရေအိုးကိုထားခဲ့ပြီး
မြို့ထဲပြန်ပြီး တွေ့သမျှလူတွေကို သခင်ယရှုက သူ့အပြစ်ရှိသမျှကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောပါတော့တယ်။
ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ တကယ်ပဲထိတွေ့သွားကြသူမှန်ရင် အရင်က မိမိစွဲကိုင်လာတဲ့အရာတွေကို
အလိုအလျောက် စွန့်လွှတ်ထားနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယော၎း ၂၈
ုခင်ဗျားရဲ့အရင်က အိုးမပါရင် ရေမပါဘူး/ ကောင်းတာလုပ်မှ ကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတွေ၊
လူမျိုးစွဲတွေ၊ ဂိုဏ်းဂနစွဲတွေထားခဲ့လိုက်ပါ။ အဲဒါကို ဘုရားသခင်အလိုရှိနေပါတယ်။
ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းက သင်ဘယ်နှကြိမ်ပဲမှားခဲ့ .. မှားခဲ့ သခင်ယေရှုရဲ့အပြစ်လွှတ်ခြင်းက
အဲဒီမှားယွင်းမှုတွေထက် ပိုတယ်လို့ ဖော်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောကမှာ သခင်ယေရှုရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းထက်ပိုပြီး ဘယ်သူမှ အပြစ်မများပါဘူး။
လူတိုင်းအတွက် သူ့ရဲ့မေတ္တာက လုံလောက်တဲ့အပြင် ပိုလျှံနေပါတယ်။